Linux Pane Galaxy, iyo itsva kusangana kwe Samsung uye Gnu / Linux | Linux Vakapindwa muropa
Samsung iri kubhejawo paGnu / Linux. Uye kunyangwe isina kugadzira kugovera kwayo, ichave neramangwana rakabatana neGnu / Linux. Samsung yakaratidza vhiki rapfuura iyo Linux On Galaxy chirongwa. Iyi projekiti inoreva kuti Samsung yekumusoro-kumagumo mafoni, ndokuti, iyo mhuri yeGlass, inogona kumhanyisa chero Gnu / Linux kugovera.
Chinangwa cheSamsung kugadzira Convergence inozivikanwa iyo mamwe makambani akadai seCanonical kana Microsoft anga achida kuita. Nekudaro, vashandisi veSamsung vachakwanisa kumhanyisa chero chishandiso pane yavo smartphone kana kuve nekomputa yakazara nekuda kwayo DeX yekushandisa.
Panguva ino, Samsung ichavhura Anwendung yeApple inotibvumidza kumhanyisa chero Gnu / Linux application pane iyo smartphone. Haisi yekufungidzira sezvazvinoitika nemamwe masystem sezvo ichizoshandisa iyo Linux kernel iyo yese Android masisitimu anayo. Kuti umhanye izvi zvinoshandiswa, pamusoro peiyo Samsung app, mushandisi achafanirwa kumisikidza Gnu / Linux kugovera, kusanganisira iyo yakakura Ubuntu.
Linux Pane Galaxy inoshandisa iyo Android kernel kushanda
Gare gare, Samsung inoda kuti iyi app iwedzere uye igone kushandura iyo smartphone ive yakazara desktop desktop PC yatinogona kushandisa negonzo, keyboard uye kuongorora. Izvi chii ikozvino inowanikwa neiyo Samsung Galaxy S8 uye DeX zvishongedzo, ichaunzwa kune ese mafoni mune iyo Galaxy renji uye neGnu / Linux desktop.
Linux Pane Galaxy inoita kunge ichave iri kuvimbisa chirongwa nekuti Convergence inobatsira vashandisi vazhinji, asi zvinoita sekunge hapana kambani inoda kuiunza kuzadzikiso. Parizvino, chirongwa chega chiripo chinonzi chinonzi MaruOS iyo inoedza kuunza Debian kune yedu smartphone. Saka isu tinogona kufunga kuti iko Kuungana kwave kukundikana, asi zvanga zviri chaizvo kana kuti zvangove nenzira yakaipa? Linux Pane Galaxy inoita kunge iri kuvimbisa uye zvirokwazvo ine vateveri vazhinji, zvakanaka iwo mafoni emhuri yeGalaxy akawanda, asi Samsung ichachengeta chirongwa ichi kwenguva yakareba here? Unofungei?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Linux Pane Galaxy, iyo itsva kusangana kwe Samsung uye Gnu / Linux
Pakutanga zvinonzwika zvakanaka kwazvo kwandiri asi ngatimirirei kuti tione mhedzisiro, ndinovimba yaive nzira yekuunza GNU-Linux kudesktop.